MA SUURTOGAL IN AY KU KORAAN BASBAASKA SIBERIA, IYO NOOCYO NOOCEE AH AYAA SAAXIIBO QABAY QABOW - NOOCYO OO AH BASBAAS SIBERIA
Ugu Weyn Ee Noocyo oo ah basbaas Siberia
Dhamaan bilowga iyo beeralayda khibrad leh waxay og yihiin in basbaasku yahay dhaqan kulul oo jacayl iyo iftiin leh.
Warshadaan waxaa loo isticmaalaa oo kaliya diyaarinta cunto-karinta, laakiin sidoo kale daaweynta dadka iyo daawada.
Pepper waxaa ku jira nafaqooyin badan iyo fiitamiino, xitaa xitaa dalagga beeraha.
Mid kasta oo bannaanka u leeyihiin siraha gaarka ah ee dhirta sii kordhaya, kuwaas oo ka caawiya iyaga si ay u helaan dhalidda wanaagsan, ka gudbaya xaaladaha cimilada ee Siberia.
Pepper waa dalagga digaaga ee cimilada kulaylaha, iyo sanadlaha ah ee Siberia.
Laakiin xitaa tani ma aysan ka hortagin dadka jecel in ay ka baxaan beerta.
Inkasta oo uu asal ahaan ka soo jeedo dalka Mexico, khudraddaas waxaa lagu abuuri karaa xaalado Siberian ah. Si taas loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad ogaato dhammaan fikradaha daryeelka iyo abuurista dhaqanka. Tallaabooyinka Agrotechnical waxay u baahan yihiin u hoggaansanaan adag, haddii kale waxaad ka niyadjabi kartaa goosashada keentay.
Ka hor inta aadan iibsan miraha basbaaska, waa inaad taxaddarisaa waxyaabaha soo socda:
Baakada waa in lagu qoro "Iskuduwaha Siberia."
Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad taxadarto nolosha nolosha shelf ee abuurka.
On "taariikhda xirmada" waa in ay sidoo kale fiiro gaar ah, waa in aan ka badan laba sano.
Faleelyo macaan "California mucjisada": sifooyinka, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Mucjisada California waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee basbaas macaan.
Muddadii Bisaylkiisa waa mid dhexdhexaad ah.
Waqtiga ugu badan ee laga soo bilaabo beeritaanka si uu u istaago miraha tufaaxa wax yar wax ka badan 120 maalmood.
Xayawaanku waxay ku koraan qiyaasta dhexdhexaad ah, sidoo kale, meelo qiyaastii ah 65-75 cm, geedo hal mar ah, ilaa toban miro ayaa kori kara wakhti. Warshadu waa mid go'aaminaysa.
Miraha basbaaska waa weyn, miisaanku wuxuu gaarayaa 150 garaam. Jidhku waa mid aad u fiican oo casiir leh. Dhinaca derbiga waa 8 mm. Qaababka miro waa dhir, oo leh xulasho wanaagsan oo lagu xakameynayo.
Waxay leedahay maqaar aad u cufan, dhalaalaya oo qumman. Inta lagu jiro Bisaylkiisa, waxay soo iibsataa midab cagaaran, iyo qaan-gaaro buuxda, jilicsan oo casaan.
Waxaan rabaa in aan ka sheego dhadhanka aadka u macaan ee basbaas leh macaan iyo macaan. Thanks to tayada kuwaas, kala duwan yihiin ku haboon yahay wax kasta oo xiisaha nafaqada iyo si fiican u qurxin miiskaaga.
Fasalkan gabi ahaanba aan qabyo ahayn waxayna siinaysaa fursad wanaagsan si ay u hesho wax-soo-saarka wanaagsan, xitaa xaaladaha cimilada aan degganeyn. Wax-soo-saarka beeraha wuxuu ka kooban yahay ilaa toban kiilo mitir labajibbaaran.
Qaar ka mid ah tayo wanaagsan California Miracle:
Dhaqanka waxaa loola jeedaa noocyada xilliga bartamihii.
Si fiican u saameeyaa waxay saameysaa sumcaddiisa.
Wanaag ayaa iska caabineysa cuduro kala duwan oo weeraraya noocyada kala duwan.
Pepper waxaa loo isticmaali karaa dhammaan tilmaamaha cul culus.
Uma baahna daryeel taxadar leh.
Miraha waxaa lagu kala saaraa cabbirka.
Waxay leedahay sifooyin aad u jilicsan.
100% biqilka abuurka.
Mucjisada California waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan.
Waxay u dulqaadataa isbeddelada cimilada kala duwan.
On dhinaca dhinaca xun ee basbaas this ma odhan kartaa wax kasta.
Baasaboor macaan "Belozerka"
Dhaqanka STAM. Ereyga wuxuu ku oodanayaa basbaas. Waqtiga waqtiga laga bilaabo laga beerto si loo yareeyo miraha dillaacay ayaa wax yar ka yar afar bilood.
Xididada waxay koraan dherer yar oo ah qiyaastii 45-70 cm, taas oo muujinaysa isdhexgalka geedka.
Buundooyinka caleenta aad u culus. Pepper "Belozerka" waxaa lagu kori karaa labadaba hawada furan iyo aqalka dhirta lagu koriyo.
Midhaha basbaaska waa mid dhexdhexaad ah, miisaankuna wuxuu gaarayaa 100 garaam. Jidhku waa mid aad u fiican oo casiir leh. Dhinaca derbiga waa 6 mm.
Qaababka miro ayaa ku jira qaab shaashad ballaadhan, oo leh feeraha caanka ah iyo fiiqan fiiqan. Waxay leedahay maqaar aad u iftiin leh. Inta lagu jiro Bisaylkiisa, waxay ku qaadataa midab cad oo leh rinjiga dahabka ah, iyo bisaylkiisa oo buuxa wuxuu helayaa midab casaan ah.
Miraha ku jira jirridda waxay ku jirtaa xaalad xijaaban. Foornada ayaa si aad ah u roon.
Waxaan rabaa in aan ka hadlo dhadhanka basbaaska leh macaan iyo macaan, iyo sidoo kale dhaqanka wuxuu leeyahay dhadhan qoyan oo dabiici ah. Sababtoo ah astaamaha, fasalka ku habboon wax kasta oo aad u fiican iyo si quruxsan u qurxin suxuunta la kariyey.
Weli miraha way ku kala duwan yihiin waxyaalaha ku filan fitamiin C, aad muhiim ugu ah qofka.
Wax-soo-saarka beeruhu wuxuu soconayaa illaa siddeed kiilo mitir oo labajibbaaran.
Sifooyinka wanaagsan sifooyinka noocaan kala duwan:
Dhaqanka waxaa loola jeedaa noocyada hore ee dhexdhexaad ah.
Sare u sarreeya waa tilmaame wanaagsan.
Waxaa si fiican u diidaya cudurada sida: kore, qoyan iyo qallalan qallalan, Alternaria, Verticillia.
Dhaqanka waxaa loo isticmaalaa dhammaan dhinacyada wax soo saarka iyo isticmaalka cusub.
Faleebo "Belozerka" waxaa loo qaadi karaa fogaanta dheer, maadaama ay leedahay midho tayo sare leh.
Miraha waxaa lagu kala soocayaa kaydintooda waqti dheer isla waqti isku mid ah, ha luminin dhadhanka.
Bisaylka isku-midka ah ee miro-dhiska ayaa door weyn ka ciyaaraya.
Madaarka waxaa lagu kori karaa dhul furan oo la ilaaliyo.
Ismudhin by fruiting dheer.
Ma jiraan wax cillado adag ah oo ku saabsan noocan ah basbaas. Laakiin waxaa lagama maarmaan ah in la raaco iftiinka wanaagsan ee dhaqanka, haddii kale, kiis ka soo horjeeda, geedka waxaa la soo saaray, iyo ubaxyada iyo ugxan-yari ayaa dhici karta dhammaantood.
Waxa kale oo xiiso leh in laga akhriyo noocyada kala duwan ee basbaas ee gobolka Moscow
Basbaas macaan "Korenovsky" sifooyinka kala duwan ee kala duwan
Dhaqanka waa mid yar-yar. Bisaylkiisa muddo yar oo basbaas ah. Waqtiga laga bilaabo beeritaanka si looga saaro basbaaska bisil oo qiyaastii 120 maalmood ah.
Waxay duurka udgoon yar yar koraan, qiyaastii 55-65 cm oo dherer ah, oo tilmaamaya in dhirtu ay tahay isafgarad.
Caleenta kala duwanaanshahan waa mid weyn oo leh midab cagaaran. Basbaaska "Korenovsky" waxaa lagula talinayaa inay ku koraan labada meelood meelo kala duwan iyo meelaha bannaan.
Basbaas ah noocyada kala duwan ayaa leh miraha waaweyn, cufnaanta taas oo noqon karta 165 garaam. Sida noocyada ugu badan, basbaas wuxuu leeyahay hilib wanaagsan oo casiir leh.
Dhinaca derbiga waa 4.5 mm. Qaababka miro ayaa ku jira qaab ka mid ah mugdi gaaban oo gaaban ama qaab prism ah, oo leh mowjo yaryar oo caan ah.
Waxay leedahay maqaarka oo saafi ah. Inta lagu jiro koriinku wuxuu soo iibiyaa midab cagaaran, inta lagu guda jiro muddada uu kobcinta nafleyda soo iibsado midab casaan ah. Miraha ku jira jirriddu waxay ku jirtaa xaalad kala duwan.
Waxay leedahay dhadhanka caadiga ah ee qumbaha iyo basbaaska leh. Isticmaalku waa mid caalami ah.
Wax-soo-saarka beeraha waa ilaa afar kiilo mitir halkii mitir.
Wanaagsan Korinovsky basbaas, taas oo u qalantaa in la sheego:
Basbaas Korenovsky waa kala duwan dhexe-Bisaylkiisa ee Bisaylkiisa.
Muuqaal muuqda waa dhalidda sare ee dhaqanka.
Waxay ka soo horjeedaa cuduro kala duwan, iyo gaar ahaan sida: masagada tubaakada.
Basbaas "Korenovsky" wuxuu leeyahay midho tayo sare leh.
Digirrada gaar ahaan miraha waaweyn.
Plus waa isafgaradka geedka.
Waxa kale oo ay muhiim u tahay mudada dheer ee helitaanka badeecadaha.
Pepper waxaa ku jira fitamiinada sida C, B, E.
Ku faa'iido daro Kala duwan oo ka mid ah basbaas waxaa ku jira qaybaha soo socda:
Cagaarashada abuurka yaryar.
Waxay sidoo kale xasaasi u tahay la'aanta maadooyinka raadinta ee ciidda.
Basbaas macaan "Triton": sifooyinka, sifooyinka wanaagsan iyo kuwa xun
Pepper "Triton" wuxuu loola jeedaa nooca dalagyada hore u bislaaday. Saacad-xilliyeedka laga bilaabo beerto si loo hakiyo waa laba iyo badh ama saddex bilood.
Xididooyinka ayaa kobcaya qiyaas yar oo ah 35-55 cm Diyaarad digaag ah oo caleemo ah ma oggola in midhaha ay gubto qorraxda. Laga soo bilaabo hal baadiyaha oo basbaas ah inta lagu jiro mudada oo dhan dhaqanka fruiting, waxaad soo ururin kartaa konton miro.
Faleeti waxaa lagu kori karaa goobo furan oo xiran.
Miraha basbaaska waa weyn, oo leh miisaanka ugu badnaan ee 150 garaam. Jidhku waa mid aad u fiican oo casiir leh.
Dhumucda derbiga ma aha mid aad u weyn oo 5 mm ah. Qaabka miro ayaa ah miisaanka saxda ah, oo leh xulasho yaryar oo mawjado ah. Waxay leedahay maqaar aad u cufan oo sahlan.
Inta lagu jiro muddada Bisaylkiisa waxay soo iibsataa midab huruud ah, iyo xilliga bisaylka buuxa oo ah midab casaan leh. Basbaaska noocyada kala duwan waxaa loo isticmaalaa ugu horreyn ee lagu shaqeeyo ama caanaha kala duwan.
Pepper "Triton" waa gabi ahaanba aan qabyo ahayn waxayna siinaysaa fursad wanaagsan si loo helo dhalid wanaagsan, xitaa xaaladaha cimilada aan degganeyn. Wax-soo-saarka dalagga waa ilaa 10.5 kg mitir labajibbaaran.
Kooxaha wanaagsan basbaaska macaan "Triton":
Dhaqanka waxaa loola jeedaa noocyada hore ee koriinkedu, muddadani waa 2.5-3 bilood.
Dhirta aad u sarreeya ayaa ah mid muuqda oo kala duwan.
Wanaag ayaa iska caabineysa cuduro kala duwan oo ka mid ah noocyada kala duwan.
Dhaqanka waxaa loo isticmaalaa dhammaan tilmaamaha culus, laakiin inta badan waxaa loo isticmaalaa caanaha.
Midhaha dhaqanka waxaa lagu kala soocaa mugga.
Kala duwanaanshuhu waa mid aan qabyo ahayn cimilada, taas oo aan saameyn ku yeelan dhalidda.
Pepper "Triton" oo koray meelo furan oo xiran
Iyada oo leh astaamo badan oo wanaagsan, waxaa jira hal nuuc oo u baahan in la tixgeliyo. Marka laga beerto geedo on duurka u hubi inaad ka saarto ugxan-u hore. Haddii aad ilowdo, cawaaqibta ayaa noqon doonta mid adag, taas oo ah, warshadu waxay horumarin doontaa liidashada waxayna siin doontaa wax soo saar hooseeya.
Iyo kala duwan ee ugu dambeeyey ee basbaas macaan, kaas oo lagu falanqayn doonaa qodobkan waa - "Merchant"
Kala duwanaanshahan waa mid aad u yar. Pepper "Ganacsade" iyo sidoo kale "Triton" ayaa loola jeedaa nooca dalagyada hore u bislaaday.
Waqtiga ugu badan ee laga bilaabo beeritaanka si uu u goosto miraha wuxuu qaadaa waxoogaa ka yar saddex bilood. Buundada waxay u koraan qiyaasta celceliska qiyaastii 75-85 cm.
Warshad waraaq ah, wax yar kicin. Caleemuhu waa yar yara, cagaaran, cagaar. Madaarka waa la abuuri karaa furan oo lagu koriyo.
Dhaqanka Tani waxay leedahay miraha dhexdhexaad ah, miisaanka kaas oo ah 70 garaam. Miraha waa mid udgoon. Tirada buulkuna waa 2-3. Meaty iyo jidhka casiir leh.
Dhumucda derbiga ma aha mid aad u weyn, waana 5-7 mm. Maareyntu waxay leeyihiin qaab pyramidal ah, iyada oo la sii daayo hirgelinta hirarka. Maqaarka uurjiifku waa mid sahlan oo dhalaalaya.
Inta lagu jiro muddada Bisaylkiisa, waxay ku heleysaa midab cagaaran, iyo qaangaadhka oo buuxa, midab casaan ah. Kala duwan tani waxay ku jirtaa ascorbic acid 169 mg 100 gram oo ah walax ceyriin ah. Bariiska fasalka waxaa loo isticmaalaa jihooyin kala duwan.
Wax-soo-saarka beeraha waa 1.2-2.3 kiiloogitir mitir labajibbaaran.
Merchant's Sweet Pepper waxaa lagu kala soocayaa kuwan soo socda sifooyinka wanaagsan:
Natiijada joogtada ah ee kala duwanaanshahan waa tayo wanaagsan.
Midhaha basbaaska waxay leeyihiin bandhig bandhig ah.
Dhaqanka waxaa loola jeedaa noocyada hore ee koriimada, muddadani waa 3 bilood.
Sidoo kale muhiim tahay dhirta wanaagsan ee warshadda.
Faraakin waxaa ku jira qadar weyn oo sonkor ah.
Baasaboor macaan "Ganacsade" waxaa lagu abuuri karaa goobo furan oo xiran.
Dhibaato yaryar ee dhaqankan ayaa ah in xididdada geedka xasaasiga ah ee hawada la'aanteedSidaa daraadeed waxaa lagama maarmaan ah in si tartiib ah loo wejiyo ama loosen lakabka sare ee carrada.
Maxay yihiin geedi socodka beerashada iyo daryeelidda dalagga?
Hal baaldi dhul diyaarsan, ku dar hal koob oo ah ash ama lime, kadibna si wanaagsan u walaaq.
Geedo khafiif ah ma u dulqaadanayo isu tallaalidda si aad u wanaagsan, markaa waa inaad isla markiiba qaadataa galaas iyo laba abuur oo qoto dheer oo ah 3 cm si aad u beerto. Laakiin ka hor inta aan la bilaabin habka abuurka abuurka ah, waa in la farsameeyaa.
Gobolka Siberiya, habka beeritaanka basbaasta waxaa la sameeyaa bisha Maarso. Heerkulka dhulka waa in uu ahaado + 25 ° C. Markaas waxaad u baahan tahay inaad ku shub koobabka abuur ah, iyaga dabooli filim iyo ku rid meel qorrax leh.
Wixii xagaaga gaaban ee Siberia, waxaa ugu wanaagsan in la doorto noocyo Bisaylkiisa hore.
Cunto geedo ayaa awoodi kara Bacriminta dareeraha ah loogu talagalay ubaxyada gudaha. Sidaa darteed dhammaan qaybaha muhiimka ah.
Geedo loo baahan yahay in la beeray dhulka ku leh heerkul ah oo ku saabsan + 20 ° C. Masaafada u dhexeysa safafka xiga waa 85 cm, iyo inta u dhexeysa godadka 60 cm.
In dimple kasta ku shub hal qaado oo bacriminta potash, oo aan lahayn chlorine, ka dibna ku shub biyo. Ka dib markii biyaha la nuugo, waxaa lagama maarmaan ah in la beero geedo.
Geedo la beeray waa in aan la waraabin inta lagu jiro toddobada maalmood ee soo socda ilaa iyo inta geedka loo adeegsanayo. Kadib qaadashada, waraabinta waa in lagu sameeyaa biyo kulul maalin kasta.
Fursad waa shaandhada taxadar leh ee ciidda, maadaama ay suurtogal tahay in la burburiyo xididdada geedka.
Pepper ma jecla Bacriminta macdanta, sidaas darteed waxay u baahan yihiin in lagu sameeyo in tirada ugu yar. Digada waa ka fiican tahay inaad bacrimiso.
Meelaha laga beerto basbaaska waa in lagu doorto dhererka oo si fiican u iftiimaya.
Waxaa lagama maarmaan ah in loosaaro jeermisyada ka yimaada cudurrada kala duwan ee ku jira dhaqankan.
Miraha bislaado waa in la saaro waqti, taas oo u oggolaan doona koritaanka cusub iyo Bisaylkiisa ee miraha kale oo aan qaangaarka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo oo ah basbaas Siberia 2019